Soosaarayaasha Robot-yada Soosaarayaasha - Shiinaha Shirkadaha Halbeega & Warshadaha
MOTOMAN-MPL160Ⅱ robot palletizing, 5-dhidibka oo isku-dhafan oo isku-dhafan nooca, culeyska ugu badan ee la qaadi karo 160Kg, dheereynta ugu sareysa ee jiifka ah 3159mm, oo leh astaamo xawaare sare leh oo deggan. Dhamaan fallaadhihiisu waxay leeyihiin wax soo saar koronto oo hooseeya, xayndaab nabadgelyo looma baahna, qalabka farsamada ayaa fudud. Waxayna isticmaashaa ku habboon pallataynta gacmaha dheer ee L-dhidibka iyo U-dhidibka si loo gaadho kala duwanaanta ballaadhan ee ballaadhan looguna kulmo baahiyaha isticmaalaha illaa inta ugu badan
Tani aad u dabacsan Yaskawa 5-dhidibka roboleynta si wax ku ool ah u xamili karo xamuulka adigoon saameyn ku yeelan xawaaraha ama waxqabadka, waana mid deggan oo sahlan in la ilaaliyo. Waxay ku guuleysataa xawaaraha ugu dhaqsaha badan adduunka iyada oo loo marayo codsiyada mishiinnada xawaaraha hooseeya ee tamarta hooseeya iyo teknolojiyadda xakamaynta sare, taas oo yareyneysa waqtiga toogashada waddooyinka, hagaajinta waxtarka otomaatiga, iyo abuurista qiime weyn ee isticmaalayaasha.
YASKAWA pallataynta robot MPL500Ⅱ
Ku YASKAWA palletizing robot MPL500Ⅱ waxay qaadataa qaab dhismeed godan oo ku yaal gacanta robotka, taas oo iska ilaalinaysa faragelinta u dhaxeysa fiilooyinka waxayna ogaataa faragelinta eber ee u dhexeeya fiilooyinka, qalabka iyo qalabka durugsan. Iyo isticmaalka cududda dheer ee L-dhidibka iyo U-axis ku habboon palletizing waxay ogaaneysaa baaxadda ugu weyn ee palletizing.
YASKAWA pallataynta robot MPL800Ⅱ
Xawaaraha sare iyo saadka saxda saadka YASKAWA pallataynta robot MPL800Ⅱ wuxuu adeegsadaa dhudhunka dheer ee L-dhidibka iyo U-dhidibka ku habboon pallataynta si loo gaadho baaxadda ballaadhan ee ugu weyn. Qaab dhismeedka kontoroolka dhexe ee T-axis wuxuu ka koobnaan karaa fiilooyin si looga fogaado faragelinta Zero ee qalabka iyo qalabka durugsan. MOTOPAL-ka barnaamijka softiweerka waa la rakibi karaa, barnaamij-baraha ayaa loo isticmaali karaa inuu ku shaqeeyo hawlgalka pallatizing. Barnaamijka palletizing si otomaatig ah ayaa loo soo saaray, waqtiga rakibistu waa gaaban yahay, waxay ku habboon tahay in la doorto ama la beddelo hawlgallada, fudud oo si fudud loo barto, iyo hagaajinta waxtarka hawlgalka.
Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, Qabashada Gacanta Robot, Robotka Gacanta otomaatiga ah, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, 6 Axis Qabashada Robot,